Ibsa Haala Sochii naannoo WBO Irratti – Ayyaantuu Online
[ June 12, 2021 ] Ethiopia’s Prosperity Party Pile of Lies Cannot Produce a Grain of Truth	English
[ June 12, 2021 ] WBOn Zoonii Lixaa Cibraan Odaa Bulluq Weerartuu 37 Ajjeesuu Ajajni Onichaa Beeksiseera!	Afaan Oromoo
[ June 12, 2021 ] G7 in Cornwall: Thousands on streets and in sea for protests	English
[ June 12, 2021 ] U.S. tells citizens not to travel to Ethiopia due to violence and communication disruptions in Tigray, Oromia and elsewhere	English
[ June 12, 2021 ] OROMIA REGION POLICE DECLARES VICTORY IN SOUTHERN OROMIA; RESIDENTS, OLF CLAIM FRESH DEPLOYMENT OF ERITREAN SOLDIERS	English
HomeAfaan OromooIbsa Haala Sochii naannoo WBO Irratti
Qabsoon bilisummaa Oromoo bu’aa-bahii heddu keessa qaxxamuree injifannoolee danuu galmeessuun rarraga bilkisummaa, jala-bultii walabummaa Oromiyaa gahee jira. Qabsoo wareegama qabeenyaa fi lubbuu guddaan as gahe kana ufi duuba deebisanii umrii gabrummaa ummata Oromoo fi ummattoota cunqurfamoo itti dheeressuuf yaaliin mootummootii dhufaa dabraan dhufaa-dabraan Itoophiyaa hin goone hin jiru. Kan maqaa jijjiirama dharaa uffatee fi maqaa mootummaa Oromoo jedhamu jalatti qa’ee Oromoo gubee barbadeessaa jiru mootummoota dabran caalaa mirgoota dhiigaa fi lafee qabsaawotaatin argame garagalchee Oromoo dhabamsiisuu kan hojjataa jiru tahuu argaa jirra.
Akkuma kaleessaa maqaa ABO/WBO deegarta jechuun ummata keenna mana hidhaatti guuruun dararuun bira kutee naannoo sochuii WBOtti ummata nagaa fixuu, xayyaaraan rukutuu,ganda gubuun, kan inni qotee facaafatu ciree daaraa godhuun, bahee-galuu dachee itti dhiphisee gocha garaa jabinna ummata keenna irratti raawwatuu itti fufaa jira.Mootummaan nama maqaa Oromoo qabu ufi dura qabee aangootti ol bahe kun Oromiyaa zoonilee garaa-garaa keessatti Komaand postii( Commad Post) diriirsuun Oromiyaa dirree lolaa taasisee jira. Keessattuu Wallaggaa, Gujii fi Boorana keessatti gochaan Waraanaa mootummaatiin raawwatamaa jiru waan baayyee nama laalessaa ti.
Kaayyoo dabaa-cubbuu tana bakkaan gahuuf ummataa fi WBO walitti buusuu, ummatumaa keenya waliin dhahuu fi ummatoota biroo fi Oromoo walitti buusuuf hujii godhatanii itti jiru. Kanumaan waliin ummatuma keenna humnaan doorsiftee qawwee hidhachiiftee akka WBOtti duulan gochuun akka namii keenna waliin dhumu hujii godhatanii itti jirru.
Gama naanoo zoonii kibbaatti ummata keenna kan osoo daangaan mootummaa isaan hin daangessin waggoota 27 dabran WBO waliin kufee ka’aa tureen waldura nu dhaabuuf karaa dabballootaa fi tikaa isaaniitiin wanti hin yaalamin hin jiru. Ummata keenna kan WBO waliin jiraatee gaachanummaa Waraanaa Bilisummaa Oromoo tolchee beeku gaafa nuun wal dura dhaabuu dadhaban,ummata Booranaa kan WBO hammatee jiraachisee irratti ciche kana addaan qoodanii isumaa waliin cabsuun harka kennachiisuu sagantaa jedhuun shira ODP/OPDO xaxaa jirtuun murna ololaa fi maqaa balleessii hangana hin jedhamne WBO fi ummata keenna irratti facaasuu biyya alaatti( Diaspora) ijaaruun hujii diigumsaa hedduu hojjataa jiru. Hujii diidgumsaa fi wal-waraansiisuu ummata keenna Booranaa keessatti hojjatamu kana mootummaa bira kutee kanneen dantaa addaa irraa qaban hedduun keessa seenuun gumaachaa jiru. Murna alatti ijaarame kanaaf mootummaan waadaa adda addaa kan akka lafa isaniif laanna, daldala isanii aanjessina, dalagaa isinii kennina jedhu seenuufin hamilchaa jira. Hujii murna Diaspora kana itti dhiheenyaan embbaasotii Itoophiyaa tan Keenyaa, UK fi USA qajeelfama guyya-guyyaa kan kennaa jiran tahuu hubatamuun danda’ameera. Kanneen yakka daangaa dabre kana ummata keennaa fi gaachana isaa WBO irratti hojjataa jiran gaafatama jalaa kan hin bane tahuu yaadachiifna.
Shirrii mootummaa gabroomfataa baabura qabsoo bilisummaa gufachiisuuf godhu kan hin milkoofnee qofa osoo hin taane injifannoon keenya yeroo gabaabaatti kan mirkanaawu tahu mirkaneessa
WBOn ummataa isaaf wabii dha.Daangaa Oromiyaaf gaachana. Ololootaa maqaa balleessii kan ummata keennaan addaan nu fageessuuf godhamuuf kan bakka hin laanne tahuu akkasuma ummata keenna waliin taane falmaa kan itti fufnu tahuu hubachiifna.
Haga jijjiiramnii sobaa kun labsamee fi yaaliin araaraa adda adda gufatee as ummatii keenna wareegama bifa hedduu kan barooratan dabran dacha hedduu tahu kafalaa jira.Rakoon kun kan biyya guutuu tahee osoo jiruu, ergamtootni sirnaa nama nyaataa kanaa akka rakkoo ummta Booranaa qofa tahetti dhiheessuu yaalu.Kun balaa siyaasaa kan biyyattiin seentee keessa jirtu wallaaluu osoo hin taane tahe jedhamee hundee qabsoo kan tahe Zoonii Kibbaa irratti xiyyeeffatuuf kan godhamee dha.Ummatii keenna kana hubatee akkuma baroottan dabran hundee tokkummaa fi human qabsoo Oromoo tahaa ture, har’allee ufii waldura dhaabbachuu irraa,tokkummaan shira diinaa dura dhaabatuun akka fashalsiisu yaadachiifna.
Haala qabsoo ulfaataa fi walxaxaa keessatti wareegamnii lubbuu namaa hedduun mudataa akka jiru ni beekna. Akka ilaalchaa fi fedhee keenyaatti wareegamnii hin barbaachine kun tahuun irra hin turre. Garuu kan hubatamuu qabu lafa qabsoon jirtu wareegamni hin oolu.Nyaaphni waldura nu dhaabuutti milkaawee wareegamni hanga yoonaa gara lachuun baafne nu laalessa.Kun akka itti hin fufne gara keenyaan eeggannoo dandahamu hundaa ni goona.
Itti fufa qabsoo keessatti har’allee mootummaan kun ilmaanuma Oromoo maqaa ol’aantummaa seeraa kabachiisa jedhuun qawwee itt hidhaa WBOtti bobbaasuun kan itti fufu taha. Yeroo ilmaan abbaa tokkoo battala walitti qabattee dhiigaa walii dhangalaaftu ilaamuun mootummaa gabroomfataa gammachuu yoo tahu,nuuf gadda hammana hin jedhamee dha. Ilmaan Oromoo dirqama fokkataa akkasii fudhatanii WBO adamsuu irraa akka dhaabbatan dhaamna.
Diinotaa ummata keenyaantin gurmeeffamanii biyya alaa irraa kanneen hujii diigumsaa itti jiran eenyumaa isaanii tolchinee beekna.Miidhaan hujii keessaaniin qabsoo Oromoo fi ummata keenna irra gahaa jiruu fi gahuuf deemu nutti mullata. Jaarmayaan keessan kan Oromoo Booranaa walficisiisuu fi WBO/ ABO balleessuuf hojjatu “ Dhaadannoo Booranii badee” uffatee akka socho’aa jiru namuu hubataa jira. Karaa adda addaatin nama isanti erginee isan dhaabuu yaallus, kan irraa irraa deebi’aa jirtan hin fakkaatu. Ammas irruma deebinee gochaa kan irraa akka dhaabbattan akeekkachiifna.
Dhumarratti, rakkoon siyaasaa kan amma biyyatti raasaa jiru rakkoo zoonii tokkoo miti.Lollii deemaa jirus lola Booranaa fi ABO/WBO jiduu miti. Kun rakkoo biyya guutuu, lolli jirus kan ABO/WBO fi mootummaa gabroomfataa jiduu ti. Furmaanni siyaasaa akka waliigalaatti malee zoonii tokko kophaa isaa furmaata kennus tahe argatuu hin danda’u. Qabsoon keenya gaafa galma gahe furmaatii waaraan hundaaf tahu argama.Hagansuu tokkumaa keenna cimsannee walmariin fuula duratti akka deemnu dhaamanna.
Ajaja Ol’aanaa Waranaa Bilisummaa Oromoo
Mormor Caalaa says:
Waaee EBO barreessaa faajjii WBO itti dhimma bahaa as gahee fi Bakalcha keechaa hanqisuu kunis ajaaiba.
Bakkalchi bakkalachi barii didimisa diorama barii ganama waa baayee of keechaa qaba.Qabsoo keenya keessatti hiikkoo dhiigaan barreefame qaba.
Kanafuu ,yeroo waaee WBO fi ABO barreefamu waa jajalisuu fi hanqina argisiisuu afanfaajjii uumaauu warren barbaadan tochaa ture.Nama dhugaa waaee qabsoof dhimmu fakkaachaa dhaa.waan akkana kana irraa of qusadhaa,waa hanqisuu fi hirisuun hin barbaachisu.
WBO duraanii irraa
Mormor Seenaa Caalaa
America is Showing Cowardness as Millions are Faced with Death by Starvation in Ethiopia?
The Government of Tigray ensures delivery of humanitarian assistance to its people